धार्मिक – Nepal Online Khabar
Apr12021 by Puja SharmaNo Comments
मान्य’ताका अनुसार मंग’लबारको सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग हुन्छ ।यस दिन’लाई हनुमान जीको दिन पनि भनिन्छ । यस दिनलाई मं’गलको उर्जा पनि मानिन्छ । संकटको स’मयमा मानिसको उर्जा हानी हुने गर्छ । सोही मान्य’ताका अनुसार यस दिन हनु’मानलाई प्रशन्न पार्ने काम गरिन्छ ।मंग’लबारका दिन के गर्ने ? मंग’लबार अवश्य राम मन्दिर जानुहोस् । मं’गलबार हनुमा’नजीको दर्शन गर्दा मानि’समा नयाँ उर्जा पैदा हुन्छ । एउटा धा’गोमा खुर्सानी माथि, बीचमा कागती र तल पनि खुर्सानी राखेर कुनै व्यवसाय गरेको ठाउँ वा घरको ढो’कामा राख्नुहोस् । यसले नक’रात्मक काम’हरुलाई समाप्त पार्ने गर्छ ।मंगल’बार बेलुका हनुमान जी’लाई गुलाब चढाउ’नुहोस् । यसले जीव’नमा रहेका समस्या समा’धान गर्छ । मंगल’बार जहिले पनि राम’स्तोत्र पढ्ने गर्नुहोस् जसले गर्दा शुभ कामको थालनी गर्दा फल’दायी हुने वाता’वरण निर्माण गर्छ । शुद्ध ध्यु वा तेलको बत्ती बाल्नुहोस् र म
Mar12021 by Nepal KhabarNo Comments
ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बे’वास्ता नगर्नुहोला एक Share गर्नुस अ’धुरो काम बन्नेछ !!!
भगवान शि’वले बनाएको एउटा अनौठो गुफा र त्यसबारे बारे कैयौ मा’न्यता प्रचलित छन् । भनिन्छ कि, जसले यो गुफाको सुरुङभित्र जाने कोसिस गर्यो त्यो व्य’क्ति फ’र्केर आउन सकेको छैन । भारतको जम्मु कास्मिरबाट लगभग १४० किलोमिटरको दुरीमा अ’वस्थित उधमपुर “क्षेत्रमा यो गुफा छ। शि’वखोडि नामले प’रिचित यो गुफा भ’गवान शि’वले नै बनाएको वि’श्वास ग रिन्छ। यस गुफामा भगवान शि’वको वास रहेको मा’न्यता रहिआएको छ। शि’वखोडी प’ट्टीबाट छिर्दा यो सुरुङ अमरनाथ बर्फानी गएर टुङ्गिन्छ । प्रचलित मान्यता अनुसार द्वापरयुगमा साधुसन्त सुरुङ हुदै अमरना थको यात्रा गर्दथे । तर कलीयुगमा जसले यो गुफा हुदै अगाडि जाने प्र’यास गर्छ त्यो व्य’क्ति फिर्ता हुन पाउदैन भनिन्छ । हाल यो गुफा बन्द गरिएको छ ।यस गुफाभित्र रहेको शि’व लींग प्रा’कृतिक भएको जनवि’श्वास छ तीन मिटर उचाइ रहेको यस गुफाको लम्वाइ २०० मिटर लामो छ!यस ग
Feb262021 by Nepal KhabarNo Comments
भोली मिति २०७७ फागुन १२ गते, बुधवार, २४ फेब्रुअरी २०२१। माघ शुक्लपक्ष, द्वादसी (१५ः२९ बजेदेखि द्वादशी)। आर्द्रा नक्षत्र (१०ः१८ बजेदेखि पुनर्वशु)। चन्द्रराशि– मिथुन। मेष -सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् । मिहिनेत गर्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। वृष -द्विविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। वादविवादले काममा बाधा पुर्याउनेछ, सजग रहनुहोला। अरूको वचन हार्न नसक्दा दु:ख पाइनेछ। तर मिहिनेत गर्दा आयस्रोत बढ्नेछन् र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने समय छ। मिहिनेतले आम्दानी बढाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा
शनिको उल्टो चाल, यी दुई राशिलाई सबै भन्दा बढी असर !….
Posted in धर्म सस्कृती, धार्मिक
काठमाडौँ : शनिदेवले कर्म अनुसार राम्रो र नराम्रो फल दिन्छ, यसकारण यसलाई कर्मफल दाता भनिन्छ। वक्री अवस्था यानी उल्टो दिशामा परिक्रम गर्दा शनिको प्रभाव राशिहरुमा धेरै पर्छ। अधिकांस मानिस शनिदेवसँग डराउँछन् र शनिदेवलाई प्रसन्न गराउन अनेकन् उपाय अपनाउँछन्।जब कुनै ग्रह वक्री हुन्छ तब त्यसको दृष्टिको प्रभाव अलग हुन्छ। आगामी वर्ष २०७८ को जेठ ९ गते शनि वक्री हुनेछ। शनिदेवको वक्री दृष्टि कुन राशिमा बढी पर्ह्ह र यसको नराम्रो प्रभावबाट कसरी बच्न सकिन्छ। शनि ग्रहका दुई राशि छन्, कुम्भ र मकर। वक्री शनिको सबैभन्दा बढी असर यिनै दुई राशिमा हुन्छ। साढे सातीको कारणले यो प्रभाव अझ बढ्नेछ। यस बाहेक शनि तुलामा उच्च र मेषमा तल हुन्छ। वक्री अवस्थामा तुला राशिका जातकले सकारात्मक परिणाम पाउँछन् भने मेष राशिका जातकले नकारात्मक परिणाम पाउँछन। शनि जब कुनै राशिको सप्तम भावमा हुन्छ त्यतिबेला अशुभ फल दिन्छ।
Feb212021 by Nepal KhabarNo Comments
पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु…हेर्नुहोस ।
काठमाडौं : पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी पनि सुरु गरिएको छ । विगत वर्षमा एक वर्षअघि नै भारतका विभिन्न अखडाबाट साधुसन्त पशुपति क्षेत्रमा आउने गरेकामा यस वर्ष अहिलेसम्म नआएको कोषले जनाएको छ । यस वर्ष फागुन २७ गते महाशिवरात्रि पर्व परेको छ । कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको महाशिवरात्रिमा विगत वर्षमा जस्तो भीड नहुने अनुमान गरिएको सदस्य सचिव डा ढकालले बताउनुभयो । यद्यपि मन्दिरमा आउने जति भक्तजनलाई भने दर्शन गराउने गरी कोषले तयारी शुरु गरेको छ । भारत र नेपालका विभिन्न अखडाबाट महाशिवरात्रिमा पशुपति आउने साधुसन्तको सूची विगत वर्षदेखि नै पहिले नै कोषमा आउने गरेको छ । को'रोना महामा'रीका कारण गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर यस वर्ष पुस १ गतेदेखि बिहान ६देखि अपराह्न २ बजेसम्म खुला गरिएको छ । भक्तजनले दिनभर मन्दिर खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
Aug232020 by Nepal KhabarNo Comments
धार्मिक ,शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।विषयसूची लुकाउने१ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन
Aug112020 by Nepal KhabarNo Comments
आज मङ्गलवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्णको तस्बिरसहित आजको राशिफल हेर्नुहोस् ।ॐॐॐ
आज साउन २७ गते मङ्गलवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजको दिन विभिन्न मठ-मन्दिरहरुमा भगवान कृष्णको विशेष पुजा आजा गरिन्छ । आजको राशिफल पढ्नुहोस ! मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ): टाढाका नातागोता वा परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । शुभ'कार्यको च'र्चा चल्नेछ । ताकेको कार्य पुरा होला । दैनिक कार्यमा प्रगति हुनेछ । मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा ): बौद्धिक काममा सफलता मिल्नेछ । कला र गलाको प्र'भाव बढ्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । आ'त्मिक सन्तुष्टि मिल्नेछ । सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे ): आज साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ । मनमा उ'त्साहका साथै बोली विक्ने समयछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते ): आज धा'र्मिक यात्राको योगछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । नजिकको व्यक्तिबाट आँ'टेको काम सफल हुनेछ । प्र
Jul152020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अ'योध्याको बारेमा दिएको अभि'ब्यक्तिलाई लिएर नेपालमा भारतीय स'न्त तथा मह'न्थहरुले आ'न्दोलन गर्ने चेता'वनी दिएका छन् ।भारतका सन्त'हरुले नेपालमा पनि आफ्ना अ'नुयायी रहेका र उनीहरुलाई नेपालमा आ'न्दोलन च'र्काउन निर्देशन दिने बताएका छन् । सन्त मह'न्थहरुको सर्वोच्च सं'स्था अखिल भारतीय आ'खडा परिषदको नेपालमा रहेका अनु'यायीले नेपालमा आ'न्दोलन च'र्काउने चे'तावनी दिएका हुन् । उनीहरुले भनेका छन्, म'र्यादा पुरुष राम नेपालको अयो'ध्यामा ज'न्मिएको र भारतले सांस्कृ'तिक अ’तिक्रम’ण गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व'यान आप'त्तीजनक छ हामी नेपालमा यस वि'रुद्ध नेपालमा आ'न्दोलन च'र्काउँछौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार भानु जयन्तीका अवसरमा सरकारी निवास बालुवाटारमा राम भारतमा नभई नेपालमा ज'न्मिएको र भारतले न'क्कली अयो'ध्या नि'र्माण गरेको अभिब्यक्ति दिएका थिए